Ryan Fraser Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Ryan Fraser Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa ngegama lomsebenzisi "Wee Man, Ryzi". I-Ryan Fraser Ingane Yendaba Yethu kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje.
Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, isizinda semindeni, imfundo / umsebenzi wokuzikhandla, impilo yasemsebenzini yokuqala, indlela yokuhamba nodumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo bomshado, impilo yomuntu, impilo yomndeni, nokuphila kwamaqiniso njll.
U-Ryan Fraser Indaba Yobuntwana- Ukuhlaziywa. Isikweletu ku-EveningExpress, i-DailyRecord no-PremierLeague
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uFraser kumlingana osekudala waseScotland nomgomo usiza ochwepheshe. Kodwa-ke, isandla esincane kuphela abalandeli bebhola abathinta i-Bio yeFraser ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
URyan Fraser wazalwa ngosuku lwe-24th kaFebruwari 1994 kunina, uDebiebie Fraser nobaba, uGraeme Fraser edolobheni lase-Aberdeen, enyakatho-mpumalanga yeScottland, e-United Kingdom. UScott uhlanga lwakhe nobuhlanga bungumhlophe ozelwe njengowokuphela kwengane kubazali bakhe.
URyan Fraser uvela emlandweni womndeni othobekile, ophakathi nendawo yezemidlalo. Kungani Ikhaya Lezemidlalo? kungenxa yokuthi umama wakhe wayengumphathi wamamitha angu-100 omele iScotland ngemicimbi yezemidlalo.
URyan Fraser wachitha iminyaka yokuqala yokuphila kwakhe e-Aberdeen, eScotland ngaphambi kokuhamba nabazali bakhe e-Oman, ezweni laseMpumalanga Ephakathi lapho ubaba wakhe athola khona umsebenzi wasogwini olwandle, TheScottishSun umbiko. Ubaba kaRyan u-Graeme Fraser lapho ehola umsebenzi we-oyela-mpumalanga wenza isinqumo sokuthuthela umndeni wakhe wonke.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- I-Education ne-Career Buildup
Indlela Uhambo Lwabhola Lwaqala Ngayo:
Ngenkathi uRyan Fraser ehlala e-Oman nabazali bakhe, waba nebhola nakho konke akwenza kwakuvele nje ukukhahlela. Wayengazi ukuthi wayakha ithalenta kulo. URyan akazange akhanye nje ngebhola lakhe, wafunda ukuthi angaphuma kanjani. Lokhu kwakuyisikhathi esilandelayo izakhi zofuzo zomama zaqala ukubonakala emdlalweni noma kwabazali bakhe abazithandayo ekuqaleni.
Ekhuluma ngesimo, uFraser wake wabonakala ebusheni bakhe ethi; "Umama nomama wami abathandi ngempelabhola, ngakho angikwazi ukuthi ngifinyelele kanjani kulo"Kungenzeka ukuthi bebona ukuthi indodana yabo ihle kakhulu emdlalweni owawatholanga nje ukuthakazelisa kuwo, kodwa wenza isinqumo esiphezulu sokubuyela ezweni lakubo.
Ngesikhathi uyise kaRyan Fraser eqaphela ukuthi indodana yakhe ibhekene nebhola lebhola lezinyawo, wanquma ukuyeka umsebenzi wakhe ocebile wamafutha konke egameni lokubuyela emuva e-Aberdeen. UFraser osemusha wayeyi-10 ngesikhathi umndeni wakhe wanquma ukumsiza ukuba aphishekele amaphupho akhe okuba ngumdlali webhola lezinyawo.
Nakuba kwakunzima kuGraeme ukushiya umsebenzi wakhe wezemvelo kanye noDebbie ukubhekana nomhlalaphansi we-Athletics, noma kunjalo, bobabili abazali abathandekayo banquma ukuqhubeka bephila ngamaphupho abo ngendodana yabo.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Isinqumo somndeni kaRyan Fraser sazikhokhela njengoba sibona uRyan omncane ekhetha izingane eziphumelelayo eziye zabhekana nezilingo ne-Kincorth soccer academy e-Aberdeen, eScotland.
Ukufakwa esikoleni esihloniphekile bekudutshulwa olude, oluye lwakhokha nakanjani. Njengoba uRyan eqhubeka ekhulile, wazibonela ngokuphila kahle ne-Academy. Ekuqaleni komsebenzi wakhe, kwacaca ukuthi uFraser osemusha wayesezuze ifaji lomama we-speedster. UFraser wayeyincinyane kunazo zonke nezinyane elisheshayo esikoleni.
URyan Fraser, kwesokudla, esebenza ngesikhathi sokuqala emsebenzini wakhe. Isikweletu ku I-COEUK ye-EveningExpress
Ukuphila e-Aberdeen FC:
URyan Fraser washiya iKincorth Academy eneminyaka engu-16 ngemuva kokusayina inkontileka ne-Aberdeen FC. Njengoba uRyan Fraser eqhubeka ekhulile, wazibonela ngokuphila kahle ne-Academy. Wenza ukuqhubeka okuqhubekayo ngokusebenzisa amaqembu e-academy, ukuthola ukwethenjwa komqeqeshi wakhe osemusha.
Ngonyaka u-2010 wabona uFraser enikezwa ithuba lokudlala eqenjini eliphezulu lase-Aberdeen lapho eqhubeka khona emidlalweni yakhe. UFraser wathinteka ngokushesha eqenjini lokuqala lokuqala le-Aberdeen ngesikhathi sokuqala kwesizini se-2012-13 Scottish Premier League. Lo mdlalo wamenza waba ngumdlali osemusha wesikhombiso seNyanga ngo-Septhemba no-Okthoba 2012.
Ryan Fraser Indaba Yomsebenzi Wokuqala. Isikweletu ku I-Daily Record.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela Igama
Lapho i-Going Got Tough:
Ukusebenza okuyingqayizivele kaRyan Fraser kwaba umthombo wokuqhubeka uphazamiseka futhi kunenkathazo kubadlali abaphikisayo. Isimo saphelelwa yisikhathi ukuthi yi-Aberdeen umphathi UCraig Brown kudingeke ukuthi azwakalise ukukhathazeka ukuthi amaqembu aphikisayo abhekise kuFraser ngemidlalo enzima.
Ukulandela lezi zinselelo, uFraser wanquma ukulahla isandiso sokwenzela isivumelwano nokuthemba ukuthi uzoqhubeka nebhola lakhe eningizimu eNgilandi. Lesi sinqumo saphambene nabalandeli base-Aberdeen abasabela kabi.
Kunzima Qala Ekuphileni ku-ACF Bournemouth:
Indlela kaRyan eya ekudumeni Indaba- Lapho i-Going Ithola I-Tough. Isikweletu ku khulumaSPORT
Ukulimala okweqile kwamadolo akuthole esimisweni sakhe sokuqala sokuqeqesha kunqanda kakhulu ukuqhubekela phambili kokuqala kukaFraser eBournemouth. Okwakunzima kakhulu uRyan ukuba athwale kwakuwukuhlukunyezwa kwakhe kokubili yena nomndeni wakhe kusukela kubalandeli base-Aberdeen abazange bajabule ngokuhamba kwakhe.
Ekhuluma ngesipiliyoni, uFraser wake wathi: "Kwakunzima ukubhekana nesinqumo sami sokudlulisa okwenzeke kabi lapho ngilahla futhi ngilimele ngokushesha. Kwaphela amasonto amabili ukuhamba, ngazizwa sengathi ngenza isinqumo esifanele, kepha mina nomndeni wami sathungatha ". Kwakukhona isikhathi uRyan Fraser athola ama-tweets nemilayezo, eyayihlukumezeka kakhulu futhi ayifanele ukungayiphenduli.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Kumlando Wendaba
Naphezu kokuqala kwakhe okudumazayo eBournemouth nokuhlukumeza okwenzekile ukuqhutshwa, uFraser wayehlale eqiniseka ukuthi wenze ucingo olufanele esinqumweni sakhe sokuhamba eningizimu. Unqume ukukhuluma kwakhe emgqeni kunokulalela lokho abalandeli bakhe ababekushoyo mayelana naye nomndeni wakhe. Ngokusho kukaScott, "Uma abanye abantu besacabanga ukuthi ngenze isinqumo esingalungile, kulungile. "
Isikhathi sokulimala saba yisikhathi sokuzindla ngokujulile kukaRyan Fraser owathi ngamazwi akhe; ...
I-Ryan Fraser Road eya ekubuyiseni kusuka ekulimaleni. Isikweletu ku AFC Bournemouth.
"Ngokulimala, angizange ngidlale isikhathi esiningi sokuqala, kodwa ngazizwa ngithi ngakhula njengomdlali. Kukhona izinto emdlalweni wami engangingaqondi ngempela. Ngaleso sikhathi ngaqala ukwazi umdlalo ngaphakathi. Ngafunda lapho ukwenza izinto, lapho ngiwela khona ibhola, lapho ngingena ngaphakathi, lapho ngizohlala khona. "
Ngemva nje kokulimala, akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba uRyan aqale ukuchuma ogwini oluseningizimu. Lokhu kwambona ukuthola indumiso enkulu ngenxa yeziboniso zakhe ezikhangayo. URyan Fraser waqhubeka nokusiza iqembu lakhe ukuba liwine i-2014 / 2015 Football League Championship.
I-Ryan Fraser Road eya eDeni leNdaba
Njengesikhathi sokubhala, uRyan manje usungulwe ngokuqinile ku-Premier League ngaphansi kuka-Eddie Howe. Isizini se-Premier League ye-2018 / 2019 ibonile ukuthi uyayisiza inkosi yaseBournemouth. Noma kunjalo njengesikhathi sokubhala, i-Fraser ithathwa njengomsizi onikezelayo ongcono ngemuva I-Eden Hazard futhi Christian Eriksen.
I-Ryan Fraser Inhloso Yokusiza Irekhodi
Namuhla, izwe liye labona ukuthi isinqumo esinesibindi nesigxiliwe sasiholele ekuvekeni okuphawulekayo futhi sibonakalise inhlanhla yeqembu lakhe. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ungubani u-Ryan Fraser Girlfriend noma Wag?
Njengoba u-Ryan Fraser ephakama udumo, umbuzo ngomlomo wonke umuntu ...Ubani intombi kaRyan Fraser noma i-WAG?. Ukhohlwe ukuphakama kwakhe, akukho ukuphika iqiniso lokuthi uRyan Fraser unemfanelo ethandekayo, ngokubukeka okunomusa okuyiqiniso okwenza umvini othandekayo kubesifazane.
Kodwa-ke, ngokwemibiko eminingana e-inthanethi, kubonakala uRyan Fraser ebonakala engashadile njengesikhathi sokubhala. Noma kunjalo, sicabanga ukuthi angase abe nobuhlobo kodwa akhetha ukungenzi umphakathi okungenani okwamanje.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaRyan Fraser kuzokusiza wenze isithombe esiphelele kuye. Phuma eqenjini, uRyan Fraser uhlala impilo evamile futhi ethobekile yokuphila phakathi.
Ryan Fraser Personal Life Facts
Ngaphezu kwalokho, ku-Personal Life yakhe, u-Ryan Fraser uyinto engezansi. Uthanda ukugcina i-spotlight ngokuqinile emdlalweni wakhe, ngakho-ke, ugweme ukuxoxa ngokuphila kwakhe siqu kumapulatifomu womphakathi. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abezindaba bacacise okuningi kuye.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso Okuphila Komndeni
Ngaphambi kokuba angene ebhola, uRyan Faser umndeni wayecebile ngokwanele ukuze athole cishe i $ 100,000 (umholo wonyaka wezisebenzi zikawoyela) ngonyaka ngezinzuzo zomhlalaphansi zemidlalo zomama wakhe. Kodwa-ke, ekuqaleni kwalesi sihloko, kwakungekho wonke amalungu ekhaya likaRyan Fraser owayethande imidlalo kusukela ekuqaleni.
Uthi bewazi?… Umama kaFraser u-Debbie ubelokhu egijima ema-Olympics, kodwa wabe eselimala ngamadolo owaphela umsebenzi wakhe. Naphezu kukaDebbie ekubeni yisikhathi eside lapho ethatha umhlalaphansi emidlalweni yezemidlalo, wayevele efuna ukuphuma ngaphandle kwendodana yakhe enkulu lapho ephethe umongo osebenzayo. Ekhuluma ngalokho, uRyan wayeke wathi; ...
"Umama wami usheshe kunami - ngokushesha kakhulu! Walimala ngaleso sikhathi, kodwa sine-sprint phansi emgwaqeni futhi wayesalokhu engishaya. Uncane kunami kodwa uyashesha! "
Naphezu kokunikeza umama wakhe ama-accolades amaningi, uFraser wayezobonga phakade uyise wakhe owenza umhlatshelo omkhulu wokushiya imali yakhe yokukhokha amafutha emsebenzini wakhe. Konke uGraeme Fraser wayefuna ukuba indodana yakhe ijabulele ibhola futhi igxila kulokho ngisho nangenxa yamaphupho akhe.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
I-Fraser njengesikhathi sokubhala inexabiso lemakethe ye-£ 16.20m ngokusho I-TransferMarket Bika. Noma kunjalo, leli qiniso alithinti ukudlula I-Lifestyle yama-Lavish kalula ebonakalayo ngezimoto ezinamafutha amancane, izindlu ezinkulu, amantombazane kanye ne-buzz. URyan Fraser ukhetha ukusebenzisa imali yakhe yokubhalisa igalofu.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
URyan Fraser wayekade engumlutha wePizza ne-Ice-Creams, mhlawumbe imbangela yenkinga yakhe yokulimala ngaphambili. U-Eddie Howe wake wamqinisekisa ukuthi akhiphe imikhuba yePizza ne-Ice-Creams kwezinye ukuze athole uhlelo lokudla okunempilo kakhulu. Ukudla okunomsoco okunempilo kuye kwamenza wakwazi ukubhekana nokuqina okunamandla nokuphathwa kanzima okuvame ukuphikiswa abaphikisi.
I-TV yakhe yokuqala ye-TV
URyan Fraser uphakathi kwabambalwa bebhola lezinyawo abaye baba yingxenye yokubukeka kombukiso we-TV. Uthi bewazi?.Ube ngumdlali wezemidlalo "Ibhola ku-5: I-Championship".
Mayelana nokuphakama kwakhe:
Ryan Fraser- Isidlali esifushane ku-Premier League. Isikweletu ku-DailyMail
Emile kuma-5ft angu-4s nje, manje uFraser umdlali omncinyane kunesiNgisi esiphambili njengendiza ngesikhathi sokubhala. Naphezu kokuphakama, inkanyezi encane yenza ukukhula okukhulu ekulweni leNdunankulu.
Ryan Fraser Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Isifinyezo sevidiyo
Sicela uthole ngezansi, isifinyezo sethu sevidiyo se-YouTube sale phrofayela. Vakashela ngomusa futhi ubhalisele kithi Isiteshi se-Youtube ukuze uthole amavidiyo amaningi.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Ryan Fraser Ingane Yethu Ingane kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-AFC Bournemouth Football Diary
I-Scottish Football Diary
I-Trent Alexander-Arnold Indaba Yobuntwana I-Untold Biography Facts
UHarry Kane Ubuntwana Indaba Eningi I-Untold Biography Facts
I-Jesse Lingard Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
UJonjo Shelvey Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka